U-2 သူလျှို3နှစ်ပေါင်း5months ago #401
Gentelmen ,, သင်ကအစဉ်အဆက်တွေးမိ?
ဦး-2 သူလျှိုလေယာဉ်ရှေ့ပြေးအဆိုပါ Edge တွင်ဘဝအသက်!
ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်တည်ရှိသည် Beale လေတပ်အခြေစိုက်စခန်း,
U-2 မှမူလနေရာဖြစ်သည်။ ဤသည်လေယာဉ်တင်မူလကရန်သူများကိုအပေါ်ထောက်လှမ်းရေးကိုစုသိမ်းဖို့စစ်အေးခေတ်ကာလအတွင်းက high-မြင့်ထောက်လှမ်းရေး, စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ကင်းထောက်မစ်ရှင်ပျံသန်းဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ ယနေ့ U-2S ဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးမှမြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးထံမှမစ်ရှင်အမျိုးမျိုး၏ထောက်ခံမှုအတွက်ပျံ။
U-2S single-ထိုင်ခုံ, Single-အင်ဂျင်, High-မြင့် / အနီးရှိအာကာသကင်းထောက်ခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်အချက်ပြမှုများ, ပုံရိပ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်တိုင်းတာနဲ့လက်မှတ်ထောက်လှမ်းရေးပေးလေယာဉ်ပျံ, ဒါမှမဟုတ် MASINT ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှန် 70,000 ခွကေိုကျော်ကုန်းပြင်မြင့်တွင်ပျံသန်း, U-2 ရှေ့ပြေးအာကာသယာဉ်မှူးများကဝတ်ဆင်သူတို့အားအလားတူအပြည့်အဝဖိအားဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါလေယာဉ်၏အနိမ့်အမြင့်ကိုင်တွယ်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်စက်ဘီး-type အမျိုးအစားဆင်းသက်ဂီယာလေယာဉ်ဆင်းသက်စဉ်ကာလအတွင်းတိကျသောထိန်းချုပ်မှုသွင်းအားစုလိုအပ်; ရှေ့ဆက်မြင်ကွင်းကိုလည်းကြောင့်တိုးချဲ့လေယာဉ်တင်နှာခေါင်းနှင့် "taildragger" configuration ကိုကန့်သတ်ထားသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်စက္ကန့်ဦး-2 လေယာဉ်မှူးမြင့်နှင့်လေယာဉ်ပြေးလမ်း alignment ကိုများအတွက်ရေဒီယိုသွင်းအားစုပံ့ပိုးခြင်းအားဖြင့်လေယာဉ်မှူးကူညီ, high-performance ကို Chase ကားထဲတွင်တစ်ခုချင်းစီကိုဆင်းသက် "chases" ။ ဤရွေ့ကားဝိသေသလက္ခဏာများ U-2 ပျံသန်းဖို့ကမ္ဘာပေါ်မှာအခက်ခဲဆုံးလေယာဉ်များအဖြစ်ကျယ်ပြန့်လက်ခံထားသောခေါင်းစဉ်ဝင်ငွေပေါင်းစပ်။
မစ်ရှင်အပေါ်နေစဉ်, U-2 လေယာဉ်မှူးမကြာခဏ Terminator လိုင်းဟုခေါ်သည့်သဘာဝဖြစ်ပျက်မှုကြည့်ရှုပါ။ နေ့နှင့်ညဉ့်ခွဲခြားတဲ့လိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစက "မီးခိုးရောင်လိုင်း" နှငျ့အဖြစ်ရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ် "ဆည်းဆာဇုန်။ " ဒါဟာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေထုကွေးနေရောင်ခြည်တစ် fuzzy လိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤ "ဟက်တာ ah" ယခုအချိန်တွင်အာကာသ၏အစွန်း skimming တဲ့အခါမှာငါတို့ဘယ်လိုသေးငယ်၏အဆင်းလှသောသတိပေးချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဦး-2 သူလျှိုလေယာဉ်ရှေ့ပြေး့ Prep + Takeoff နှင့်မြေယာ
တစ်ဦးက USAF ရှေ့ပြေးအရှေ့တောင်အာရှတွင်တစ်ခုဖျောတည်နေရာမှာကင်းထောက်မစ်ရှင်စဉ်အတွင်းတစ်ဦး-2 နဂါးသမ္မတကတော်ကင်းထောက်လေယာဉ်ကိုပျံသန်းဖို့။ ဗီဒီယိုကိုလည်းပါဝင်သည်: ရှေ့ပြေး preflight ပြင်ဆင်မှု; လေယာဉ်ပြေးလမ်းပေါ်သင်္ဘောသားများနှင့်လေယာဉ်ပျံ; လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကာလအတွင်းယာဉ်; takeoff နှင့်ဆင်းသက်; Chase ကားတစ်စီးကနေရှုမြင်။